Kwethulwe olokufundisa i-IT kwabakhubazekile | News24
Kwethulwe olokufundisa i-IT kwabakhubazekile
Abanye babafundi abahlomulile kulolu hlelo.ISITHOMBE: Sithunyelwe
IKOLISHI elifundisa ngezobuchwepheshe kumaKhompyutha ngokuhlanganyela nenhlangano engenzi nzuzo iThemba Njilo Foundation bethule ngokusemthethweni uhlelo lokufundisa abantu abakhubazekile ikhompyutha.
Lolu hlelo lwethulwe ngokusemthethweni ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-16 kuLwezi(November) emahhovisi eThemba Njilo Foundation kanti lungaphansi kwe kolishi i-Dynamic Youth Development Services (DYDS) kanti isebenzisane ngokuhlanganyela neThemba Njilo Foundation.
Inhloso yalolu hlelo ukuthuthukisa abantu abaphila nokukhubazeka kwezemakhompuyutha.
Ngokusho kuNkk Princess Mabaso nophuma kwa-DYDS uthe lolu hlelo lokufundisa abantu abakhubazekile bahhala baxhaswe kulona i-National Skills funds kanti kunabafundi abangama-30 abazohlumula kulona.
“Uhlelo luqale ngenyanga kaMfumfu (October).Abafundi bazofunda izinyanga ezili-12 kanti kulezo zinyaka eziyisithupha zisobe sibahambisa ngaphandle ezindaweni zokusebenza ukuze bezothola izipiliyoni. Inhloso enkulu ngalolu hlelo ukuthi sifuna ukusiza siphinde sithuthukise abantu abaphila nokukhubazeka ukuthi bangagcini nje behleli emkhaya ingekho into abayenzayo.
“Sifuna ukuthi ngisho bephuma lana beqeda bakwazi ukuthi nabo baqasheke. Nama-laptop lawa abawasebenzisayo awekhethelo akhelwe bona ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa bazohamba nawo uma ngabe sebeqedile ukufunda kulolu hlelo bazokwazi ukuqasheka nabo,” kubeka yena.
Uthe ngesikhathi betomula abantu abazosizakala kulolu hlelo basebenzisane kakhulu namakhansela kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo ezisebenza nabantu abaphila nokukhubazeka ngoba bebefuna ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu abahlomulayo kulolu hlelo ingoba kufanele ngempela ukuba bahlomule.
Imeya yomasipala uMsunduzi nophinde abe ngumsunguli weThemba Njilo Foundation uthe bajabule kakhulu ngokuthi sekunohlelo olufana nalolu lokusiza abantu abaphila nokukhubazeka.
Uthe okumjabulisa kakhulu ukuthi lolu hlelo lusungulwe ngabantu abasha.
“Siyalujabulele kanti futhi silishayela ihlombe lolu hlelo.
Lolu uhlelo oluhle kakhulu lokukhulisa luphinde lufindise abantu abaphila nokukhubazeka ngezifundo zekhompuytha. Njengohulumeni silushayela ihlombe uhlelo olufana nalolu njengoba singeke sikwazi ukwenza zonke izinto futhi sikwazi ukufinyelela kubona bonke abantu.Ngenxa yaloluxhaso mali abaluthole kwi-skills funds kazwelonke lentsha ikwazile ukuthi ikwazi ilwenze lube impumelelo,” kubeka yena.
Laba bafundi bazosebenzisa indawo ye-Themba Njilo Foundation njengesikhungo sabo sokufundela kuze kuba bayaphothula.